के हो सोह्र श्राद्ध ? कसरी सुरु भयो १६ दिन पितृ कार्य गर्ने चलन ? – ताजा समाचार
के हो सोह्र श्राद्ध ? कसरी सुरु भयो १६ दिन पितृ कार्य गर्ने चलन ?
श्राद्ध संस्कृत शब्द हो, जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, कुनै पनि कार्य वा चीजलाई निष्ठा र विश्वासका साथ सम्पन्न गर्नु । हिन्दु धर्ममा आफ्नो पितृको श्रद्धापूर्वक गरिने अनुष्ठानलाई श्राद्ध भनिन्छ । जुन पुरोहितबाट गराइन्छ ।
हिन्दू मान्यताअनुसार पितृको आत्मा पितृलोकामा बास गर्छन, जुन स्वर्ग र पृथ्वीको बीचमा रहेको र यसलाई मृत्युका देवता यमले शासन गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। जब नयाँ पुस्ताको देहान्त हुन्छ तब पहिलो पुस्ताको आत्मालाई स्वर्गमा भगवानको नजिक लगिन्छ त्यसकारण पितृलोकमा अन्तिम वा अघिल्ला तीन पुस्ताको मात्र श्रद्धा गर्ने संस्कार छ।
हिन्दू धर्मशास्त्रका अनुसार, महाभारत लडाइँका क्रममा कर्णको देहान्त भयो र उनको आत्मालाई स्वर्ग लगियो । स्वर्गमा उनलाई सधै खानाको सट्टा बहुमुल्य चिजहरु ल्याएर दिइयो । सो देखेर कर्ण अन्नको खानाको खोजीमा भगवान इन्द्रको शरणमा पुग्छन् । उनले खानाको रुपमा धातु दिइएको भन्दै इन्द्रसँग गुनासो पोख्छन् । कर्णको गुनासो सुनेका देवराज इन्द्र भन्छन्, “तिमीले सधैँ जीवनमा यस्तै चिज दान गरेउ, तिमीले आफ्नो पितृका नाममा कहिल्यै खानेकुराको दान गरेनौ, ब्राह्मण भोजन गराएनौ, यस कारण तिमीले जे दान गरेउ, आज स्वर्ग त्यही पाइरहेका छौ ।’ इन्द्रका कुरा सुनेर निराश बनेका कर्णले आफूले पितृकाबारेमा जान्ने र सोहीअनुसारको कर्म गर्ने मौका नपाएको भन्दै इन्द्रसँग माफी माग्छन् । कर्णका कुरा सुनेपछि इन्द्र प्रशन्न भई कर्णलाई आफ्नो पितृकार्य पूरा धर्तीमा पठाउन आदेश दिन्छन् ।
धर्ती फर्के पछि कर्णले निष्ठा र श्रद्धापूर्वक आफ्नो पितृ कार्य तर्पणसहित सम्पन्न गर्छन् । कर्णले धर्तीमा आएर पितृकार्य गरेको समय अर्थात भाद्र शुल्क पक्षको पूर्णिमा तिथिबाट १५ दिन अर्थात आश्विन कृष्णपक्षको औंशीसम्म गरिने पितृ कार्यलाई सोह्रश्राद्ध भनिन्छ । यस वर्ष सोह्र श्राद्ध यही भदौ २८ गते शनिबारबाट सुरु हुँदैछ । स्रोह्र श्राद्ध हिन्दू धर्मालम्बीहरुको महान चाड बडा दशैंको पूर्वसन्ध्यामा गरिन्छ ।
जसलाई महान पर्व मनाउनु अघि पितृको स्मरणसहित श्रद्धापूर्वक उनीहरुप्रति गरिने कर्मको रुपमा पनि लिइन्छ । पितृकार्यपछि शक्ति स्वरुपा देवीहरुको आराधना गरिन्छ । देवी कार्य सम्पन्न गरेपछि दानवीय प्रवृत्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको खुसियालीमा देवीको प्रसाद स्वरुप जमरा र टीका ग्रहण गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।